Suga ဆီက အကြိုက်ဆုံးအရာကို မေးတဲ့အခါ ချစ်စရာအဖြေလေး ပေးခဲ့တဲ့ Jimin - Asia News Bar
အဖွဲ့ဝင်တွေက တကယ့်သွေးသားအရင်းလိုမျိုး ချစ်ခင်ကြတဲ့ BTS အဖွဲ့မှာတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သဘောကျတဲ့အရာလေးတွေရှိနေပါတယ်။ ခပ်အေးအေးပဲနေတတ်တဲ့ Suga ဆီက အဖွဲ့ရဲ့အစွာဆုံး၊ အသွက်ဆုံး Jimin လေးတစ်ယောက် သဘောကျတဲ့အရာက ဘယ်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ? Jimin ကတော့ Suga နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူကြိုက်တဲ့အရာကို fansign တစ်ခုမှာ ဖြေသွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ထိုပွဲမှာတုန်းက BTS‘s Jimin ကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ပါတယ်။ အအေးဆုံး Suga ဆီက Jimin အနေနဲ့ အကြိုက်ဆုံးအရာကိုဖြစ်နေတာကို မေးခဲ့တာပါ။ အတူတူနေတာကြာပြီဖြစ်လို့ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် ခရေစေ့တွင်းကျသိနေတဲ့ Jimin က အဖြေကို ချက်ချင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Jimin က “ကိုကြီး Suga နဲ့ပတ်သက်လို့ အကြိုက်ဆုံးက သူ့ရဲ့ရိုးသားမှုပဲ။ ရိုးသားလွန်းလို့ တစ်ခုခုကို အမှန်တိုင်းသိချင်တဲ့အခါ Suga နဲ့ စကားပြောလိုက်ရင် ဖြစ်သမျှအမှန်တိုင်းထွက်လာတာပဲ။ အဲ့လောက်ထိကိုရိုးသားပါတယ်။ ပြီးတော့ Suga hyung က တချိန်လုံးအားမာန်ပြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိပေမဲ့ အဲ့ပုံစံကကိုပဲ တစ်မျိုးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတာပါ” လို့ ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
Suga နဲ့ပတ်သက်ပြီး Jimin ရဲ့အဖြေက အရှိကိုအရှိအတိုင်းဖြေသွားတာကြောင့် တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းနေပါတယ်။ အပွင့်လင်းဆုံးပြောနိုင်တာကိုကြည့်ပြီး နှစ်ယောက်သား ဘယ်လောက်တောင် ရင်းနှီးလဲဆိုတာ ပေါ်လွင်လှပါတယ်။ ပရိသတ်တို့ကော Suga နဲ့ပတ်သက်လို့ Jimin ရဲ့အဖြေကို သဘောတူရဲ့လား? ဒီညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ရဲ့အဆုံးမရှိ ရင်းနှီးနေမှုကို တကယ်ကို အားကျနေပါပြီ။
Next ယခုနှစ်ထဲမှာ မင်္ဂလာသတင်းကြားရမယ်လို့ ထင်​ကြေး​ပေးခံ​နေရတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီး ၃ ဦး »
Previous « (၂၀၂၁) နှစ်ဝက်အတွင်း Weibo မှာ ရှာဖွေခံရမှုအများဆုံး အနုပညာရှင် (၁၀) ဦး